Khilaafkii Wasiirka Warfaafinta iyo Maareeyaha TV ga qaranka oo markale cirka isku shareeray | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Khilaafkii Wasiirka Warfaafinta iyo Maareeyaha TV ga qaranka oo markale cirka isku shareeray
Published on February 14, 2015 by sdwo · No Comments
Khilaafkii huursanaa ee wasiirka warfaafinta Cabdilahai Cukuse iyo Maareeyaha TV ga qaranka Khadar Xasan ayaa markale maanta cirka isku shareeray. Khilaafkan cusub ayaa ka dashay Wasiirka Warfaafinta oo doonay inuu soo farogeliyo kala shaadhaynta barnaamijyada ka baxa TV ga qaranka isagoo amar qoraal ah ku bixiyey in la hakiyo oo la yara joojiyo barnaamijka cusub ee uu bilaabay TV ga qaranku oo la yidhaah Bandhig Hibeed oo markii u horeysay TV ga qaranka ka baxay Habeenkii uu Jimcahu soo gelayey. Warqada uu wasiirku ku soocodsiiyey joojinta barnaamijkan ayaa nuqul ka mid ahi uu nasoo gaadhay sidoo kale waxa uu nuqul ka mid ahi uu na soo gaadhay warqad kale oo burinaysa amarkaasi wasiirka oo uu ku saxeexanayahay Maareeyaha TV ga qaranku Khadar Xasan. Hadaba halkan hoose ka akhirso labada warqadood ee is burinaya. Waxa hore looga warqabay in TV ga uu Madaxweynahu ka dhigay hayad madaxbanaan oo u madaxbanaan shaqaalaheeda iyo barnaamijyadeeda iyadoo hadana weli ka tirsan wasaarada warfaafinta. Waxa la dhawraaba waa go,aanka uu madaxweynahu ka qaato khilaafkan culus ee mar kale dibada u soo ifbaxay.